Maxaad shaqsiyaadka Colorblind cagaaran cas ku badan yihiin? - 💡💻 Iris - Filter Light Blue for Protection Eye 🛌👀
Iris findhicilan ugu Wayland
Iibso la PayPal
Iibso la Debit / Card Credit
Iibso la Seeraar
Maxaad shaqsiyaadka Colorblind cagaaran cas ku badan yihiin?
Caadi ahaan indho midabka waa xaalad hidda.
cagaaran The, indho buluug iyo casaan midabka waxaa badanaa maray hoos uga waalidiinta.
hiddo-taas oo ah in lacag gobolka waxaa lagu fuliyaa ee koromosoom X iyo tani waa sabab ah sababta rag badan oo ay saameeyeen ka dhibaatadan sida is barbar haweenka.
Waxaa jira sababo badan oo dhibaato this.
Waxaa jira qaar ka mid ah xaqiiqooyinka xiiso leh oo ka kaas oo dadka ma aha gebi ahaanba la yaqaan, kuwanu waa sida soo socota:
indho midab ma aha indha la 'jinsiga, Dhab ahaantii ay wax badan oo dadka dhexdooda loo soo noqnoqda. Dhibaatadu waxay saamaysaa 1 in kasta 12 nin wadankan.
In xaqiiqooyinka sax indho midabka, dadka waa indha midabka oo kaliya haddii ay arkaan midabo kaliya cawl iyo madow. Tani waxay si kastaba ha ahaatee waa mid aad u dhif ah in xaqiiqadu. Dawladdu waxay xaalad badan ee deficiency color waa deficiency midabada. In gobolka this, ee cagaarka iyo casaan ka eegi kartaa wareeriya.
Badanaa dhibaatadan waa la kala dhaxlo. Waxaa sida caadiga ah hooyada maray in ay ina on koromosoom 23aad. In kastoo, waxa ay sidoo kale sabab u noqon kara cudurada indhaha oo kala duwan, dhaawac retina ama gabowga.
bisadaha The, bakaylaha, iyo eeyaha aragtaan waxaas oo inta badan midabka cirrada. Dhanka kale, daayeer ka Aragga leh midabka xoog halka dhicin iyo bees Aragga weyn oo ka arki kartaa midabada si cad oo aadanaha oo aan xitaa ka arki kartaa.
Caadi ahaan saamaynta deficiency midabada noqon kartaa jilicsan, dhexdhexaad ah ama bilaa naxariis ah ku xiran deficiency ah.
Haddii qof ka cabanaya indho midab dhaxlay markaas xaaladda ay sii joogi doono isku dhan iyada oo ay nolosha, ma heli doono wax kasta oo caafimaad ama ka xun.
Waa maxay sababta casaan-cagaaran colorblind
Guud ahaan, Waxaa jira saddex nooc oo ah unugyada koorta iyo nooc kasta oo ay leedahay dareen ka duwan oo u naxariistay in wavelengths dogob.
Mid ka mid ah nooca koorta arkaa iftiinka buluug, halka mid kale arkaa cagaaran iyo mid saddexaad arkaa hadh cas.
Marka qof eegayaa shay, nuurka galaa ay isha oo yididiila galin unugyada koorta.
maskaxda ee gobolka this fasiraya calaamadaha ka soo unugyada loo yaqaano si aan si fudud u arki kartaa midabka ah ee shayga.
cagaaran The, buluug iyo casaan loo yaqaano oo dhan shaqo wada jidaynayey dadka si ay u arkaan noocyo kala duwan oo dhan ah oo midabo.
Tusaale ahaan, kiis marka loo yaqaano buluug iyo casaan yihiin Yururb hab gaar ah ka dibna mid ka mid arki doonaa midabka guduudan.
Waxaan fahmi karaa in aad daalan tahay isagoo colorblind ah oo aad rabto inaad aragto midabada sida shakhsiyaadka caadiga ah.
Taasi waa sababta aan aad ee Vision. Use the software to see colors just like any normal individual.
Sababaha sax ah jirka ah ee indho midabka weli la baarayaa laakiin waxaa la qiyaasayo in indho midab by iyo kuwa waawayn waa ay keento yaqaano cilladaysan ama mararka qaar si qalad ah in dariiqa ka koorta maskaxda.
Dadku waxay la aragti midabka caadiga ah ayaa dhamaantood waxay ku lahayd saddex nooc oo koorta ama dariiqyo si fiican u shaqeeya, laakiin indho color waxey dhacdaa marka hal ama in ka badan hal nooc oo koorta waa out of si.
Tusaale ahaan, in haddii koorta cas waxaa markaas burburay aad ma awoodi doonaan in ay arkaan midabada ay ku jiraan midabo casaan dareemi.
Inta badan dadka indhaha la 'midab kala garan hooska kama dambaysta ah ee midabka cagaaran, iyo kuwo gaduud.
Isku day Vision imtixaanka colorblind. Waxaad ka heli kartaa haddii aad colorblind ama ma yihiin.
contact@iristech.co · Shuruudaha iyo Xaaladaha · abuuray by Daniel Georgiev.
Waxaan isticmaalnaa cookies si aad bixiyaan waayo-aragnimo ee dhirta wanaagsan, shakhsiyeeyo content iyo falanqaynta gaadiidka goobta. Read ku saabsan sida aan u isticmaali cookies iyo sida aad u xakamayn kartaa adigoo gujinaya "Privacy Preferences". Haddii aad sii isticmaasho this site, ogolaashahaaga in our isticmaalka cookies.
Xarunta Xulasho Privacy
si adag lagama maarmaanka ah
Marka aad booqato website kasta oo, waxaa laga yaabaa in uu kaydiyo ama dib u helidda macluumaadka on your browser, inta badan ee foomka of cookies. Macluumaadkan waxaa laga yaabaa in adiga kugu saabsan, doorbidida ama qalab iyo aad waxaa inta badan loo isticmaalaa in la sameeyo shaqo goobta sida aad ka filan in. Macluumaadka aan inta badan si toos ah aad u aqoonsadaan, laakiin waxa ay ku siin karaan waayo-aragnimo ah web more shakhsi.
Maxaa yeelay, waxaannu ixtiraamaan xuquuqda aad u leedahay asturnaanta, waxaad dooran kartaa in aysan ogolaan in qaar ka mid ah cookies. Click on the ciwaan category kala duwan si aad u hesho war dheeraad ah oo la beddelo goobaha default our. Si kastaba ha ahaatee, xannibaya qaar ka mid ah cookies saamayn laga yaabaa in aad waayo-aragnimo ee goobta iyo adeegyada aan ay awoodaan in ay bixiyaan.
Waxaad ka akhrin iyo isku raacay in our Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Cookies oo lagama maarmaan u ah goobta si fiican u shaqeyo.
Had iyo jeer Active
Waxay kaa caawin na kula isticmaalka free of codsiga Abaal marin iyo in lagu siiyo sicir-dhimis ah haddii qof lagu casuumay in aad website u Iris.
PHPSESSID, ugu yeedhi, ap_id
Waxaa loo isticmaalaa si ay ula socdaan is dhexgalka user iyo ogaado dhibaatooyinka ka iman kara. Kuwaas waxaa naga caawiso hormarinta adeegyada our by bixinta xogta gorfaynta ku saabsan sida users isticmaali this site.
MA, OGOLAANSHAHA, 1P_JAR, HALKAN
Akoonkaaga waa la xiri doonaa iyo xogta oo dhan si joogto ah la tirtiro doonaa oo aan la soo kabsaday karo. Ma hubtaa?